I-Tal Haus - Kumbindi weBarossa Valley - I-Airbnb
I-Tal Haus - Kumbindi weBarossa Valley
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaz
Embindini weBarossa! Le ndawo imiselwe kakuhle ikumbindi weTanunda. I-Tal Haus ikwisitrato esiyintloko, kwaye uhamba nje imizuzu eyi-3 ukuya kwezinye zeevenkile zokutyela ezintle kunye neebhari zewayini.
Yindlu endala eyakhiwe ngo-1928, yindawo encinci yembali yaseBarossa kwaye yindawo entle yokubuka yonke into ekhoyo kule ngingqi. I-Tal Haus inazo zonke izinto ezenza uzive usekhaya - ilungele abantu abathandanayo abafuna iholide epholileyo okanye intsapho edinga indawo.
Kukho amagumbi okulala amabini aneebhedi ezinkulu ezikumgangatho ophezulu. Indawo enkulu yokuhlala inendawo yokutyela ukuya kutsho kubantu abayi-8 ibe enye yeesofa inokutshintshwa ibe yibhedi enkulu.
Ikhitshi linayo yonke into oyifunayo, ngoko unokupheka isaqhwithi okanye uzulazule uye kwenye yeevenkile zokutyela zasekuhlaleni. Ukusetyenziswa ngokupheleleyo kwezinto zokuhlamba impahla, i-WiFi yasimahla kunye nokufikelela kwi-Stan Stream Service ukuze ubukele yonke imiboniso yeTV yakutshanje kunye neemuvi.
Kukho indawo entle kwiveranda engaphambili apho ungabukela khona umhlaba udlula - ujonge kwi-Main Street yaseTanunda.
Igumbi lokuhlambela elinye elineshawara nendlu yangasese.
I-Tanunda isembindini weBarossa ngoko ungaya kuyo yonke indawo uze ufumane izinto ezininzi onokuzibona uze uzenze - kuquka ukutya newayini ehlabathini lonke. Ezinye zezinto esizithandayo ezikumgama wemizuzu emihlanu ziquka...
I-Ferment Asian - enye yezona Asia zanamhlanje zaseOstreliya. Ayiphelelanga nje ekutyeni okumnandi, uludwe lwewayini oluphumeleleyo yinto onokuyibona - http://www.fermentasian.com.au
I-Vino Lokal - Ibhari yewayini, indawo yokutyela kunye negumbi lokungcamla ungangcamla ezinye zezona ndawo zintle ngabavelisi bewayini. Likhaya le-Artisans of the Barossa eliquka uJohn Duvall, Hobbs of the Barossa, Imperifex, Sons of Eden and Schwarz Wine Co. Kwaye izinto zokutya ezivela kuMpheki, uRyan Edwards ziyavakalelwa. http://www.fermentasian.com.au
I-Musque - yindawo yokutya yale mihla kunye nebhari, banee-gins ezingaphezu kwe-500 zokutya kodwa unokufumana ibhotile efanelekileyo yewayini yasekuhlaleni, ubambe i-burger okanye wonwabele ukutya okuphucukileyo. https://www.musque.com.au/food
Ukuba ezi zinto azidada isikhephe sakho ungajonga iZ Wines, 1918 okanye utye kamnandi uze ufumane ikofu kwiBlackbird Cafe.
Ukuba ufuna ukupheka isidlo sakho sangokuhlwa - ivenkile enkulu yasekuhlaleni (iminyango emithathu nje kuphela) inemveliso emininzi yasekuhlaleni kunye nemali eqhelekileyo yemarike.
Kwindawo engaphambili yenkcubeko - iGalari Yengingqi yaseBarossa ikumgama wemizuzu nje emihlanu - ungabona umboniso wakutshanje uze ujonge iNduli neSon Kaen ezaziwayo ehlabathini lonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Maz
Sineminyaka elishumi siseBarossa kwaye wamkelekile ukuba usifowunele ukuba ufuna amacebiso okuhlala ixesha lakho eBarossa. Kukho ipotfoliyo eneenkcukacha kule ndlu ekwenza ucinge ngezinto ezifumanekayo - ukutya, iwayini nenkcubeko zininzi apha eBarossa. Ukuba awuqinisekanga ukuba wamkelekile ukuba usifowunele kwaye singakunceda wenze isigqibo.
Kwaye ukuba kukho nayiphi na ingxaki ngendlu okanye naziphi na izinto ezinokusetyenziswa, siyakuvuyela ukujikeleza size silungise izinto.
Sineminyaka elishumi siseBarossa kwaye wamkelekile ukuba usifowunele ukuba ufuna amacebiso okuhlala ixesha lakho eBarossa. Kukho ipotfoliyo eneenkcukacha kule ndlu ekwenza ucinge…